Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Mandray anjara amin'ny fizahantany tompon'andraikitra ny vazimba Maasai teratany Tanzania
teratany Maasai any avaratr'i Tanzania izao dia manolotra mpizaha tany zavatra mihoatra ny sakafo nentin-drazana.
Sahirana izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny famolavolana firavaka vita amin'ny hoditra sy ireo zavatra antitra izay hahatonga ny fitsangatsangan'ny mpizahatany tsy ho hadino.
"Ireo mpizahatany malalantsika mitsidika ny fizaran-tany fizahantany avaratra [dia] ho gaga [h] hividy haingon-koditra tsy manam-paharoa noforonin'ireo vazimba teratany mba tsy ho hadino ny dia nataon'izy ireo," hoy i Esther Stephano, talen'ny vondrona mpamokatra hoditra Maasai vao niforona. fanomezam-pahefana avy amin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
Oikos Afrika atsinanana, tamin'ny alàlan'ny tetikasa iray vatsian'ny Vondrona eropeana, dia nanomboka nanome hery ny mpiompy amin'ny alàlan'ny fanodinana hoditra amin'ny fiompiana amin'ny fikasana hamorona foiben'ny indostrian'ny hoditra ara-barotra any amin'ny faritra avaratry Tanzania manan-karena.
Ny hevitra dia ny fampiasana ireo biby fiompy, vokatra an-tsokosoko izay matetika ariana any ivelan'ny tanàna izay mamorona faritra Enduimet Wildlife Management ao amin'ny distrikan'i Longido, faritra Arusha, hanaovana kojakoja sy kiraro ho an'ny mpizahatany.
Ny manam-pahaizana momba ny hoditra any Oikos ao Afrika Atsinanana, Andriamatoa Gabriel Mollel, dia nilaza fa vondrona misy mpahazo tombony 25 misy vehivavy 18 sy lehilahy 7 no nozarina momba ny fomba fampiasana akora biolojika ao anatin'izany ny papaya, sokay ary mimosa, hanaovana «tanning».
"Nampianarinay izy ireo tamin'ny fampiasana legioma, indrindra ny papay, ny fihinanam-bilona, ​​ny fiomanana amin'ny hoditra amin'ny fampiasana, ny vakana ary ny famokarana vokatra vita vita vita amin'ny hoditra vita amin'ny tanana amin'ny endrika maro," hoy Andriamatoa Mollel, ary nanampy fa ireo mpahazo tombontsoa dia afaka manao vokatra vita amin'ny hoditra avo lenta aorian'ny fiofanana nandritra ny 14 andro tao amin'ny Mkuru Natural Skin Training Center.
"Ny fanomezana fahefana ny mpiompy hampiasa ny indostrian'ny hoditra dia mpanakalo lalao," hoy izy, ary nampiany hoe, "Ireo karazana hetsika ireo dia manakiana ny mpiompy satria manolotra hetsika isan-karazany amin'ny fidiram-bola."
Nilaza ireo nahazo tombontsoa fa nomena fiofanana amin'ny teoria sy ny fotoam-pivarotana izy ireo hampitaovana azy ireo amin'ny fahalalana ary avy eo ny fahaiza-manao hanodina ny hoditra manta ho lasa hoditra, alohan'ny hampiasana an'io hoditra io mba hamokarana kitapo, fehikibo ary mpihazona fototra, ankoatry ny hafa.
“Raha nanana fitaovana aho dia afaka nanomboka namokatra fehikibo sy zavatra hafa. Tena tiako ny lesona fanodinana hoditra. Tsy mbola fantatro taloha fa afaka manamboatra hoditra ianao amin'ny alàlan'ny siny kely, ”hoy i Kilembu Nguchicha, pastora iray avy ao amin'ny tanàna TingaTinga.
Christina Lomayani avy ao amin'ny Village Irkaswa dia nilaza fa nahita maso ireo pastôrista Tanzania nanary hoditr'osy sy ondry ary omby noho ny tsy fahampian'ny tsena, fa noho ny fahalalany dia nivoady izy hizara ny fahalalana amin'ny hafa mba hiantohana ny hoditr'ireo hoditra. sanda fanampiny
Ny talen'ny Oikos East Africa, Ramatoa Mary Birdi, dia nilaza fa manantena izy fa ny hetsika vita amin'ny hoditra dia hiteraka asa mendrika ka hahazo vola bebe kokoa ho an'ireo vondron'olona pastoralista ao amin'ny Enduimet WMA.
Raha ny fanazavan-dRamatoa Birdi, ny fiofanana dia ao anatin'ny tetik'asa CONNEKT (Conservation Neighboring Ecosystems in Kenya and Tanzania) izay vatsian'ny 3 taona eropeana, izay ezahina hampiroborobo ny fampiasana maharitra ny harena voajanahary ho fitaovana hiadiana amin'ny fahantrana sy mampivoatra ny fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena.
"Ny tanjona ankapobeny amin'ny Tetikasa CONNEKT dia ny hanatsara ny fivelomana maharitra ho an'ireo olona miaina amin'ny lalan'ny fifindra-monina biby," hoy izy namarana.
Fantatra fa ity tetik'asa ity dia tanterahin'i Oikos Africa East, ONG Tanzania miorina ao Arusha miasa nanomboka ny taona 1999 mba hampiroborobo ny fiarovana ny harena voajanahary sy ny fampiasana maharitra ny harena voajanahary ho fitaovana hiadiana amin'ny fahantrana ary hampiroborobo ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena.